Siyaasadda & Diplomasiyadda | Afrikaan I Saldhiga xalka caqabadaha
Posts in category Siyaasadda & Diplomasiyadda
Sannaddii 2011-kii dawladda Itoobbiya waxa ay diyaarisay mashruuc ku baxaya lacag qiimaheedu dhan yahay 4.5 billion dollar, mashruucaasna waxa ay ugu magac dartay “Grand Ethiopian Renaissance Damp – GERD”. Kaas oo laga dhisay gobolka Benishangul-Gumuz ee dhanka bari u xiga xuduudda Itoobbiya ay la leedahay dalka Suudaan. Waxaana mashruuca loogu talogaley in uu dhammaado sannadka 2018-ka. Biyaqabaqtinka ay dhistay Itoobbiya oo le’eg 1,800 oo ballac ah iyo 1,700 oo dherer ah. Dhaamkaas oo noqon doona midka laga dhaliyo korontada ugu badan qaaradda Afrika, sidaas oo kalena ah dhaamka toddobaad ee adduunka oo dhan ugu ballaadhan ee ah biyaha korontada laga …
Qoraalladii taxanaha ahaa ee aan kaga hadlay sunta lagu duugay badda iyo barriga Soomaaliya, kuwaas oo aan baahiyay bilihii Febraayo iyo Maarso ee sannadkii hore 2019. Waxa aynnu ku dhex sheegnay maqaal ciwaankiisu ahaa “The Italian Connection: How Rome Helped Ruin Somalia?” oo uu saxafi Talyaani ahi ku qorey jariiradda Washington Post, sannadii 1993-kii. Haddaba maqaalkii waxa ay dantu qasabtay maanta in aan afka Soomaaliga u turjumo, maaddaama oo xog badan uu xambaarsan yahay, bulshaduna ay u baahan tahay si loo wada fahmo. Maqaalkii oo turjumani waa sidatan: Dhibaatada Soomaaliya waxa uu asalkeedu yahay musuqmaasuqii siyaasadeed ee cakirnaa ee Talyaaniga. …
Warbixin ka kooban 25-bog oo ay diyaarisay hay’adda dhexe ee sirdoonka Maraykanka (Central Intelligence Agency – CIA) ayaan akhriyay. Walow 25-ka bog meelo badan oo xasaasi ah ay qariyeen, haddana nuxurka iyo falanqeytuba waa ay muuqdaan. Goobaha ay qariyeenna, arrimo la xidhiidha siyaasaddooda amni ayaa u qariyeen. Warbixintani waxa ay ku saabsantahay xaaladda ay ku sugantahay Soomaali-Galbeed (Ogadenia), ka dib dagaalkii 77 ee Soomaaliya iyo Itoobbiya. Waxa ay soo saareen 7-dii bishii Abriil ee 1980-kii. Afar cutub ayaa ay ka koobantahay oo kala ah: The Background of the Ogaden Problem, The Ogaden War 1977-78, March 1978 Until the Present, Outlook …
“Ninkii aan qorshe degsan, nin qorshe leh ayaa qorshihiisa ku buuxsada”. Inta aanan ka hadlin waxa la isku haayo iyo dagaalka jira halka uu salka ku haayo. Waxaan jeclahay inaan war bixin kooban kaa siiyo labada dal waa Soamaaliya iyo United Arab Emirates: Imaaraatka waa dal yar oo ka mid ah dalalka carabta ee dhaca jaziiradda carbeed, bedkiisu waa 77,700 sq km, dheererka xeebtiisuna (coastline) waa 1,318 kilomitir, wuxuu juqraafi ahaan ka yar yahay gobolka magaciisa la yiraahdo Maine ee dalka Mareykanka kaasoo ah gobolka 39aad dhanka waynaanta bedka. Dawladda Imaaraatku waxay ka kooban tahay todoba Imaaradood (maamul) oo isu-tagay …
Afrikaan.so, July 30, 2020
Jun Wei Yeo oo ah nin u dhashay dalka Singapore isla markaana ahaa arday diyaarinayay shahaadada saddexaad ee Jaamacadda ee PhD-ga ayaa sanadkii 2015 lagu casumay bandhig aqooneed ka dhacayay magaalada Beijing ee dalka Shiina. Waxa uu xilligaasi wax ka qorayay arrimo la xiriira siyaasadda arrimaha dibadda ee dalka Shiinaha, isaga oo si gooni ah ugu dedaalayay in uu helo xog ku saasban sida dalkaasi Shiinaha uu doonayo in uu caalamka saameyn ugu yeesho oo uu u noqdo quwad aan la dhayilsan karin. Ka dib markii uu khudbad cilmiyeysan ka jeediyay bandhigaasi ayaa Jun Wei oo sidoo kale loo yaqaan …
Khilaafka Trump iyo Xi sida uu barta bulshada ee TikTok u saameeyey
Muuqaallada qoob ka ciyaarka, heesaha, iyo majaajillooyinka gaagaban, ayay caan ku tahay barta Tiktok iyada oo si gaar ah uu u soo jiitay dhalinayarada daafaha caalamka ku nool. Barnaamijkan TikTok oo lala xiriiriyo dowladda Shiinaha, waxay ka mid tahay shirkadaha ay saameysay xiisadda ka dhex aloosan madaxweynaha Shiinaha Xi iyo dhiggiisa Mareykanka Trump. Dalalka Mareykanka iyo Australia ayaa sheegay iney xayirayaan TikTok halka Hindiyana ay barnaamijkaasi ka saartay keydka laga soo dejisto App-ka ee dalka Hindiya ee loo yaqaanno App Store. Waa maxay TikTok? TikTok ayaa ah app ama barnaamij uu qofku si bilaash ah u adeegsan karo, waxaana TikTok …
Halgan dheeraa, haydaar badnaa oo hub iyo heesba la isku hurgufay dabadii ayay shacbigii Maxmiyaddii Ingiriisku gumeysanayay degganaa soo hooyeen libin la haybinayay. Waa 25kii Juun, sannadkii hoodada lahaa ee Afrika. Waa 60kii oo 60 sannadood laga joogo, munaasabadihii lagu muuneeyay aan xabbad-qaado: Garoonkii u dhawaa malcaamaddii Ina Baraawe (Masaajidka Ibraahin Dheere) ayaa casar la isugu soo baxay. Filib Karal oo gumaysigii ka wakiil ahaa iyo Cigaal oo dawladdii dhalatay hoggaaminayay ayaa joogay. Labadii calan ayaa la is-weydaariyay Timacaddena geeraarkii Kaana sib, Kanna saar ayuu ka tiriyay, Koox reer Scotland ahayd oo Cadan laga keenay ayaa miyuusig tumaysay, Habeennimadii Beerta …
Wareysigii Ra’iisal Wasaare Meles Zenawi – BBC 2008
Yuusuf Garaad, May 18, 2020
BBC Somali: Wareysiga Meles Zenawi waxay BBC daabacday Isniin 25 Febraayo 2008. 2008 dagaal kulul oo lagu hoobtay, in badanna barakiciyay ayaa ka socday Koofurta Soomaaliya siiba caasimadda, Muqdisho. Wuxuu u dhexeeyay ciidammada Ethiopia iyo kuwa Dowladdeenna oo dhinac ah iyo ciidammada Muqaawamada oo ay Maxkamadaha oo Shabaab ka mid yahay ay ugu abaabulan yihiin. Ethiopia oo intii uu dagaalku socday aan oggolaan wareysi, walibana aan maqli karin BBC, siiba Laanta Soomaaliga ayaan fursad u helay in aan tago oo aan la kulmo madax sare oo u badan Arrimaha Dibadda. Ugu dambeyn, waxaan fursad u helay in aan xafiiskiisa ugu …